केपीले दिए धोखा ! आखिर काठमाडौ ७ मा चुनाव नलड्ने भए बामदेब ! – Setosurya
स्रोतका अनुसार त्यसपछि गौतमले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्न मानन्धरलाई सुझाव दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले समय नमिलाएपछि मानन्धर छलफलका लागि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए । खुमलटारमा मानन्धर अघि नेता गौतम पुगिसेका थिए । त्यही छलफलमा प्रचण्डले राजीनामा दिने मनसाय हो भने सचिवालय वैठकमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । पछि तीन नेताको सल्लाहामा मानन्धरले राजीनामा स्वीकृतका लागि निवेदन प्रचण्डलाई बुझाएका थिए । त्यही निवेदन सोमबारको सचिवालयको बैठकमा पेश भएको समाचार रातोपाटीमा छ ।
गगन थापाले घुमाउरो भाषामा कांग्रेस हार्ने बताउँदै भने- कांग्रेस हारे पनि देश हार्नु हुदैन !
नेपाली जनताको अधिकारका लागि फेरि बन्दुक उठाउँछौंः नेता विप्लव
उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा कार्यकक्ष छाडेर भागे !
उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाबारे कांग्रेसमा विवाद, रामचन्द्रले राजीनामा दिन्छु भनेपछि देउवा ‘ब्याक’
प्रचण्ड सरकारमा थपिए तीन मन्त्री